Adalat macnaheedu waa cadaalada 18 luqadood waxayna ka tarjumaysaa hadafkeena ugu muhiimsan: in qof walba loola dhaqmo si cadaalad ah markuu wajahayo nidaamka cadaalada. Waxaan u dagaallameynaa sinnaan iyo ixtiraam dhaqamada kala duwan – iyadoo diirada la saarayo in la idin fahmo oo la idin maqlo. Adalat Advokatfirma waa wehelkaaga sharci ee madaxa banaan ee ka dhanka ah masuuliyiinta.
Adalat maxay qabataa?
Wuxuu ilaaliyaa xuquuqdaada.
Adalat waxay khibrad balaadhan u leedahay oo dhinacyo badan oo sharciga ah – iyo gaar ahaan kiisaska adiga ama qoyskaaga aad keli tihiin aad kaga soo horjeedaan dowlada. Intaas waxaa sii dheer, waxaan bixinaa caawimaad xagga sharciga ah si loo xalliyo kiisaska u dhexeeya dadka caadiga ah. Adalat waxay ka soo bilawdaa wax walba kiisaska yaryar ee NAV si cadaalad daro ah kuguula dhaqmeen, ilaa kiisaska aad ka hesho adeegyada ilaalinta ilmaha (barnevernet) ee gurigaaga.
Hadda nala soo xidhiidh.
Ilaa soo xidhiidh
Waa kuma Qareenkaagu?
Qareen Lars Mathias Undheim
Adalat Advokatfirma waxaa matalaya Garyaqaan Lars Mathias Undheim. Qareen Undheim wuu ka madax bannaan yahay labada maamul ee gobolka iyo ururrada gaarka loo leeyahayba. Qareen ahaan, tani waa mid muhiim ah si laguu siiyo difaaca ugu fiican ee suurtogalka ah. Garyaqaanka Undheim ayaa kiiskaaga kula dagaallami doona – bilow ilaa dhammaad.
Garyaqaan Undheim wuxuu daneeyaa caddaaladda, ixtiraamka iyo sinnaanta. Markaad caawimaad ka raadsato Undheim, waxaa laguu balanqaadayaa in macluumaadka aad bixisay laga dhigo mid la ilaaliyay iyo in laguu daryeeli doono hab aamin ah oo la fahmi karo.
Haddii booliisku ku xidho, ama adeeg bixiyeyaashu ilaalinta carruurtu albaabka ay kugu soo garaaceen, ama si caddaalad darro ah ayaa laguguula dhaqmay nidaamka dhexdiisa, qareen Undheim had iyo jeer waxa kaa xiga taleefan aad ka wacdo.!
Ma waxaad u dooneysaa magdhow rabshad laguu gaystay?
Ma booliska kugu soo oogay dacwad ciqaab ah?
Marar badan waxaad xaq u leedahay inaad hesho gargaar sharci oo bilaash ah. Nala soo xiriir haddii aad wax su’aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada sharciga ee bilaashka ah. Si aad wax dheeraad ah uga akhrisato
Haddii aadan buuxin shuruudaha aad ku heli karto kaalmada sharciga ee bilaashka ah, Adalat ayaa mararka qaarkood bixin doonta adeeg sharci oo qiimo go’an ah.
Halkan guji e
si aad waxbadan uga akhriso qiimaha go’an.
Adalat waxay leedahay shabakad balaaran waxayna la shaqeysaa turjubaano badan. Xaaladaha la xiriira kaalmada sharciga ee bilaashka ah, waxaan kuu balanqaadaynaa inaad heli doonto turjubaanada ugu wanaagsan bilaash lacag la’aan. Haddii aad rabto turjubaan gaar ah, annagaa kuu diyaarinayna.
Adalat maxaa kuu qaban kartaa?
Adalat waxay khibrad dheeraad ah u leedahay kiisaska ciqaabta waxayna ka caawisaa difaaca dhamaan kiisaska adiga, qoyskaaga ama ehelkaaga aad kaga soo horjeedo Booliska – laga bilaabo eedaysane iyo ilaa kiisku dhamaanayo.
Adeegyada ilaalinta ilmaha (Barnevernet)
Adalat waxay adiga iyo qoyskaaga idinsiineysaa kaalmada sharci ee ugu fiican marka adeegyada ilaalada cunugga (barnevernet) ay doonayaan inay farageliyaan noloshaada. Adalat waxay bixisaa caawimaad kiisaska go’aamada deg degga ah, amarrada daryeelka, kala noqoshada amarka daryeelka (celinta ilmaha) iyo korsashada qasabka ah.
Dacwadaha ka dhanka ah UDI ama UNE
Adalat waxay kaa caawin doontaa adiga iyo qoyskaaga inaad dib u midowdaan oo ay la dagaal galaan adiga ama xubnaha qoyskaaga ee laga mustaafuriyay Norway. Undheim waxa kale oo uu idinka caawinayaa dhamaan kiisaska kale ee dadku doonayaan inay yimaadaan Norway, tusaale ahaan inay ka shaqeeyaan Norway ama qaxooti ahaan u soo galaan.
Dacwad ka dhan ah loo shaqeeyaha
Haddii lagaa joojiyey goobtaada shaqada ama aad isku khilaafsantihiin cidda aad u shaqayso mushaharka ama mushaharka fasaxa, Adalat ayaa kaa caawin karta arintaas. Garyaqaanka Undheim ayaa kaa caawin kara la-tashiga ka hor intaan shaqada laga joojin (“drøftelsesmøte”), kulana qaadan doona shirarka wada-xaajoodka (“forhandlingsmøte”) ka dib marka shaqada laga fariisiyo iyo maxkamaddaba.
Dacwad ka dhan ah NAV
Adalat waxay kaa caawin doontaa inaad ka hortimaado go’aanka NAV waxayna kula secondoontaa dacwadaada aad kaga soo horjeedo NAV si wax looga qabto iyada oo nidaamka la raacayo. Qartaqaab Undheim ayaa kaa caawinaya arrimaha sida lacagta xanuunka, lacagta shaqo la’aanta, lacagta hawlgabka naafada, taakulaynta carruurta, lacagta waalidka iyo waxyaabo kale oo badan.
Adalat waxay khibrad badan u leedahay kiisaska waalidiintu ku heshiin waayaan inta jeer ee ay tahay inay arkaan caruurtooda iyo cida ay tahay inay daryeelaan caruurtooda. Garyaqaan Undheim ayaa kaala talin doona sida ugu habboon ee aad u maareyn karto xaaladda si aad adiga iyo ilmahaagaba u ilaalisaan nidaamka.
Adalat waxay kaa caawineysaa inaad hesho magdhowga aad xaqa u leedahay haddii lagugu soo oogay ama lagugu maxkamadeeyay dacwad markii dambena lagu siidaayay ama lagugu waayay waxba. Adalat waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad magdhow raadsato haddii lagugu galay fal dambiyeed aadna raadsan karto magdhawga dhibbanaha. Adalat ayaa sidoo kale kaa caawin doonta haddii aad dacwad ka gudbiso shirkad caymis shil kadib.
Dawaynta dhimirka khasabka ah
Adalat waxay ka soo horjeedaa adeegsiga sharci darada ah ee xoog ah. Garyaqaanka Undheim wuxuu caawinayaa kiisaska ka hor guddiga kormeerka (kontrollkommisjonen), maxkamadaha iyo gudoomiyaha degmada (“Fylkesmannen”) Sidoo kale, had iyo jeer waxay sameyn doonaan wixii karaankooda ah si go’aan qaldan ee laga gaadhay daawaynta dhimikra dib loo saxo.
Adalat waxay kaa caawineysaa dhammaan noocyada qandaraasyada. Waxay noqon kartaa khilaafyada la xiriira kirada halka aad qatar ugu jirto in lagaa saaro gurigaaga ama is afgaranwaaga ku saabsan iibsashada adeegyada iyo alaabada. Adalat waxay xaqiijineysaa in xuquuqdaada la ixtiraamo oo si cadaalad ah laguula dhaqmo markasta.
Go'aannada kale ee dadweynaha
Adalat waxay sidoo kale bixisaa talo sharci haddii aad rafcaan ka qaadaneyso go’aamada kale ee dadweynaha ama aad codsato rukhsad. Tani waxay noqon kartaa wax kasta oo ka mid ah codsi korsasho illaa dalab si aad u noqoto mas’uul ama go’aan aadan ku helin baasaboor, ama waxaa la go’aamiyay inaadan helin liisanka darawalnimada, eeygaaga loo raro ama meelaha kale, ama meel dadweynuhu ay ku xaddidaan xorriyaddaada. Nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay caawimaad aad ku codsaneyso waxtar ama aad rafcaan ka qaadaneyso diidmada.
Ku Soo Xiriir Maanta